IDesserts - iBezzia | IBezzia
Los iidizethi Zizitya ezimnandi okanye ezimnandi ezidla ngokutyiwa emveni kokutya okuphambili, nokuba zizithambiso, iikeyiki, iikeyiki, iayisi khrim, iitshokholethi, njl. Ngokwesiqhelo banegalelo elikhulu le-caloric kunye namandla, kodwa eBezzia siyakubonelela abo basempilweni.
Ukuba iidessert zibonakaliswa yinto ethile, kungenxa yokungabikho kwazo apho kukho iifom ezahlukeneyo abanokuzithatha. Kungenxa yokuba kukho iidessert kuwo onke amaqondo obushushu kunye noburhabaxa (kwangaxeshanye, kushushu, kuyabanda, kukhenkcezile kwaye kuxubekile).
Esi sidlo sihlala siyabonwabisa abantu, ngenxa yoko asithandabuzi ukukumema kwicandelo elinikezelwe kulo iiresiphi zokupheka.
Iyogathi kunye neparfait yeziqhamo ezibomvu
por UMaria vazquez yenzayo Iintsuku ze7 .
Iparfait yidessert engumkhenkce yaseFransi elungiselelwe inguqulelo yayo yokuqala ngesiseko sepâte à…
Sizithanda njani iilekese zesintu eBezzia. Ngokukodwa, ezo zilula njengesobada yesiko laseLa Rioja…
Ngaba ungathanda ukuqala usuku ngee-scones ezithambileyo nezithambileyo zasekhaya? Singakuqinisekisa ukuba sikhatshwa ngu...
Ngubani ongayithandiyo i-chocolate Neapolitans? Siqinisekile ukuba uninzi lwenu alunakwala…
I-Mascarpone kunye nekhekhe lemon
Ukuza kuthi ga ngoku besingekafaki itshizi ye-mascarpone kuyo nayiphi na yeebhiskithi zethu e-Bezzia kwaye jonga into esinayo…
cookies zase rustic
Siyawathanda la maqebengwana asemagqagaleni kuba asikhumbuza ezo sizenzele zona oomakhulu bethu. Ukulungiselela intlama...
Iipancakes ezincinci zetshokholethi
Namhlanje silungiselela isidlo sakusasa esilula, esikhawulezayo nesimnandi. Ezinye iipancakes ezincinci ezizaliswe itshokolethi onokuthi uziphakele zikhatshwa…
Ubisi kunye nekhekhe le-turmeric
Umbala wolu bisi kunye nekhekhe le-turmeric awuyi kukushiya ungakhathali kwaye awuyi kunambitha. Isiphumo...
Iikhukhi ezizaliswe nge-cocoa kunye ne-almond cream
Namhlanje e-Bezzia silungiselela i-cookies egcwele i-cocoa kunye ne-almond cream, engenakuphikiswa! Ezinye iikuki ezithi bonke aba…
I-Cream kunye nekhekhe lemon
Namhlanje siyakumema ukuba ulungiselele ikhekhe lesiponji eliqhelekileyo eBezzia. Ikhrimu kunye nekeyiki yesipontshi selamuni enomoya omoya...
I-yoghurt mousse kunye namaqunube kunye neetships zetshokolethi
I-mousse yeyona dessert enomtsalane kakhulu ngezona nyanga zishushu zonyaka. Yikhuphe efrijini imizuzu embalwa...